Torolàlana sy torohevitra
Fitaovana sy fitaovana
Windows Noticias dia tranokalan'ny AB Internet. Amin'ity tranonkala ity dia mitandrina izahay hizara ny vaovao rehetra momba ny Windows, ireo fampianarana farany feno ary hamakafaka ireo vokatra tena manandanja amin'ity fizarana tsena ity.
Hatramin'ny nanombohany ny taona 2008, Windows News dia nanjary iray amin'ireo pejin-tranonkala momba ny rafitra miasa amin'ny Microsoft.
Ny ekipa mpanonta Windows News dia misy vondrona iray Manam-pahaizana momba ny teknolojia Microsoft. Raha te ho anisan'ny ekipa koa ianao dia afaka andefaso aminay ity takelaka ity mba ho tonga mpanonta.
Nampiasa Windows aho hatramin'ny taona 90, rehefa tonga teo am-pelatanako ny PC voalohany. Nanomboka teo dia mpampiasa tsy mivadika amin'ireo kinova rehetra navoakan'i Microsoft teo amin'ny tsenan'ny Windows aho.
Hatramin'ny mbola kely aho dia nampiasa Windows foana, na manokana na matihanina. Tena nafana fo tamin'ny solosaina aho teo amin'ny fiainako manokana ka hatramin'ny fahatanorako dia nanao fampianarana an-tserasera aho ary lasa mpividy tsy tapaka ny gazetiboky Windows ofisialy. Amin'izao fotoana izao aho dia mampahafantatra ny tenako momba ny fivoarana farany amin'ity rafitra fiasa ity izay nahatoky taminay nandritra ny taona maro.
Nandresy ny tontolon'ny Informatica i Windows ary na dia te-handroaka izany aza izy ireo dia mbola mari-pahaizana io. Nampiasa Windows aho nanomboka tamin'ny 1995 ary tiako izany. Fanampin'izany: ny fampiharana dia tonga lafatra.
Apasionado a todo lo relacionado con la tecnologÍa desde mi primer ordenador. En la actualidad, me encargo de la gestión de servicios informáticos, redes y sistemas, y si hay algo que no ha cambiado desde mis inicios es Windows. También gestiono algún portal más en Internet como iPad Experto. Aquí podrás ver todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años relacionado con el sistema operativo de Microsoft.
Mpankafy Windows, mpikaroka ireo fiasa vaovao atolotry ny kinova vaovao. Amin'ny fiainako isan'andro dia fitaovana tena ilaina izy io hahafahanao miasa na mankafy.
Ny fiainako rehetra akaikin'ny Windows hatramin'ny 95, 98, XP ary 7, ary mankafy an'io Windows 10 io izay nampanantena zavatra betsaka tamin'ny nanombohany ary tsy diso fanantenana izany. Natokana ho an'ny zavakanto, izay manamora ny asako isan'andro i Windows. Ny manoratra momba ny asany dia zavatra tiako koa.
Tia rindrambaiko ary indrindra ny Windows, heveriko fa ny fizarana atiny sy fahalalana dia tokony ho mety fa tsy safidy. Noho io antony io dia tiako ny mizara izay rehetra ianarako momba ity rafitra miasa ity.